यी बलिउड सेलिब्रिटी, जसको एउटै गल्तिले करिअर डुब्यो — Riddle Nepal
यी बलिउड सेलिब्रिटी, जसको एउटै गल्तिले करिअर डुब्यो
मुम्बई । बलिउडमा सफल हुन त्यति सजिलो छैन । राम्रो अभिनय गरेर मात्रै पुग्दैन, आफुले अभिनय गरेको चलचित्रको ब्यापार पनि उत्तिकै राम्रो हुनुपर्छ ।
तर, चर्चामा आएका कुनै पनि कलाकारलाई पातालमा पुर्‍याउन सामान्य किन नहोस् एउटै गल्ति काफी छ । यसरी एउटै गल्तिले करिअर चट भएका केही कलाकारबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
९० को दशकमा चर्चित नायिकाको सूचीमा थिइन् ममता कुलकर्णी । तर, अण्डरवल्र्ड कनेक्सनको हल्ला चलेपछि उनको करिअर सकियो । उनको अन्तिम फिल्म हो ‘छुपा रुस्तम’ । विकी गोश्वामीसँग विवाह गरेकी ममता भारतीय प्रहरीको पक्राउ सूचीमा छिन् ।
रिल लाइफ भिलेन शक्ति कपुर सन् २००५ मा रियलमा भिलेन बनेर प्रस्तुत भए । एक स्टिङ अपरेसनमा पक्राउ परेपछि उनको पनि करिअर लगभग सकियो । उनले केही युवतिलाई फिल्ममा खेलाइदिने भन्दै यौनजन्य गतिविधी गरेको आरोप लागेको थियो ।
मोनिका वेदीको अण्डरवल्र्ड डन अबु सलेमसँग सम्बन्ध रहेको चर्चा छ । सोही कारण उनले केही समय जेल जीवनसमेत व्यतित गर्नुपर्‍यो । जेलमुक्त भएपछि पनि उनले टेलिभिजनबाट अभिनय सुरु गर्ने प्रयास नगरेकी होइनन् तर, सफल भइनन् ।
सन् २००३ मा मुम्बईमा आयोजित एक कार्यक्रममा विवेक ओवरायले दावी गर्दै भने ‘मलाई सलमान खानले मार्ने धम्की दिएका छन् ।’ ओबराय सलमानकी पूर्वप्रेमिका ऐश्वर्या रायसँग प्रेममा परेका थिए । आफ्नो प्रेमिकालाई खोसेको भनेर सलमान उनीसँग रुष्ट थिए । यही सिलसिलामा उनले सलमानबाट मार्ने धम्कि आएको बताएका हुन् । तर, यो अभिव्यक्ति उनका लागि प्रत्यूत्पादक भयो । सलमानलाई चिढ्यान नचाहने निर्माताहरुले उनलाई आफ्ना फिल्ममा लिएनन् ।
राम्रै सम्भावना बोकेका कलाकारका रुपमा चिनिन्थे साइनी आहुजा । तर, घरमा काम गर्न बसेकी महिलाले बलात्कार गरेको आरोप लगाएपछि उनको पनि अभिनय यात्रामा पूर्णबिराम लाग्यो । श्रीमती बाहिर गएको बेला आफुलाई बलात्कार गरेको आरोप कामदारले लगाएकी थिइन् भने साइनीले आरोप अस्वीकार गरेका थिए । तर, डीएनए परिक्षण गरेपछि उनले बलात्कार गरेको पुष्टि भएको थियो ।
डन दाउद इब्राहिमसँग बसेको एउटा तस्वीर सार्वजनिक भएपछि मन्दाकिनीको पनि करिअर सकिएको थियो । त्यसअघिसम्म उनी एक चल्तिकी कलाकार थिइन् । ब्रिटिश बाबु र मुस्लिम आमाकी छोरी मन्दाकिनी सन् १९८५ देखि १९९६ सम्म बलिउडमा सक्रिय रहिन् । उनले एक पूर्व भिक्षुसँग बिहे गरेकी थिइन् । अनलाइन खबर
अर्को सिन्डिकेट तोड्दै सरकार: चलचित्र क्षेत्रको सिन्डिकेमा तम्सिए निर्माता, तर्सिए हलवाला
स्टेज सोको आयोजकको नियतै खराब, कार्यक्रममा बोलाएर यौन शोषण ! विदेशबाट रित्तै फर्काउँछन् आयोजक
मलाई लामो कपाल पालेको केटा मन पर्दैन : एलिसा राई
आहा जोडी ! १९ वर्षे तन्नेरीकी ७२ वर्षे बेहुली, यस्तो रह्यो पहिलो अनुभव !
यी हुन विश्वकै परफेक्ट फिगर वाली मोडेल
नायक अनमोल केसीलाई भेट्न भन्दै भागेर आएका ४ जना भारतीय किशोरीको उद्धार
जब प्रधानमन्त्री ओलीले पत्नी राधिकाले खाँदै गरेको कप खोसे…
दुईजना ‘झोलाछाप डाक्टर’ले गर्भको छोरालाई छोरी बताए, अनुमान फेल खाएपछि लिङ्ग काटिदिए
धरहराको ठुटोमुनि भाषण गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाबुरामले फेसबुकबाट गरे यस्तो प्रहार
काठमाडौं, १३ वैशाख । आर्मी अफिसर्स क्लवमा विहीबार मध्यान्न ३ बजे प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीसँग…
दुईजना ‘झोलाछाप डाक्टर’ले गर्भको छोरालाई छोरी बताए, अनुमान फेल खाएपछि…
एजेन्सी: दुईजना ‘झोलाछाप डाक्टर’ले आफ्नो अनुमान फेल खाएपछि एउटा क्रुर घटना गराएका छन् । भारतको…
धरहराको ठुटोमुनि भाषण गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाबुरामले फेसबुकबाट गरे…
नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्दा पनि पनि पुनःनिर्माण…
दिल्ली र सन्दीपको भविष्य
नयाँदिल्ली — दिल्ली डेयरडेभिल्सले बुधबार एकाएक पत्रकार सम्मेलन गर्ने खबरसँगै केही अनपेक्षित घटनाको आशंका गरिएको…
संचालक : सन्तोष डाँगी
सम्पर्क : [email protected] live.com
इमेल : [email protected] live.com
© २०७४ । riddlenepal.com सर्बाधिकार सुरक्षित Designed By: LS